Digital Download Nkwụghachi Iwu - Gamepron
Emelitere ikpeazụ: Aug 8th, 2021
Ngwaahịa anyị na-eweta ugbu a naanị na nbudata ịntanetị. Mgbe ịzụrụ ihe a kwadoro, anyị ga-ahazi iwu gị. A na-ahazi iwu n'ime otu awa (1) mana ọ nwere ike were oge elekere iri abụọ na anọ (24) iji mezue. Ozugbo e debere iwu gị, anyị ga-ezitere gị email nkwenye site na iji adreesị ozi-e ị nyere na ụdị iwu anyị.
Email a ga - abụrịrị nnata nke eletrọniki gị ma nwee ozi ị chọrọ iji nweta nbudata ngwaahịa anyị.
A na-enyocha ihe nbudata sitere na sava anyị iji hụ na ị nwere ike ịnweta ngwaahịa anyị nke ọma. Ezie na anyị bụ mgbanwe na-ekwe ka ị mezue a ezi uche ọtụtụ nke downloads anyị agaghị anabata download n'ụzọ. Anyị na-doputa ikike ịkwụsị gị ohere gị na sava nbudata.
Anyị na-ada n'azụ ngwaahịa anyị na afọ ojuju gị na ha dị anyị mkpa. Agbanyeghị, n'ihi na ngwaahịa anyị bụ ngwongwo dijitalụ nyefere site na nbudata Ntanetị anyị anaghị enye nkwụghachi.
Ozugbo enyere / igodo / nbudata / elele anya ị kwenyere ịkwagharị ikike niile maka nkwụghachi. Enweghị nkwụghachi ga-ewepụta ozugbo ibudatara / lelee igodo ahụ ka anyị na-agụ ya dị ka agbapụtara.
Tupu ịzụta hacks, ịkwesịrị ịghọta na n'ọnọdụ ndị a na -adịghị ahụkebe, ndị ọrụ nwere ike ịchọtaghachị windo ha iji dozie nsogbu ha na aghụghọ, dị ka oge ụfọdụ onye ọrụ nwere nrụnye Windows ochie ma ọ bụ nke mebiri emebi, ọ bụrụ na onye ahịa ajụ ịtụnye, arịrịọ nkwụghachi ga -abụ. jụrụ.
Ọ bụrụ na emelitere egwuregwu, buru n'uche na a ga -emelitekwa ndị aghụghọ. A ga -ajụ arịrịọ nkwụghachi maka ngwaahịa na -anọghị n'ịntanetị/na -emelite.
Ricnye ọnụahịa, ịkwụ ụgwọ, nkwụghachi
Akaụntụ Paypal, nke ị nwere ikike iji, achọrọ maka akaụntụ ma ọ bụ igodo ọ bụla.
Mastercard, Visa, Amex ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ ị nwere ikike iji, chọrọ maka akaụntụ ịkwụ ụgwọ ọ bụla ma ọ bụ igodo ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị debanye aha maka ịkwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ, a ga-akwụ gị ụgwọ kwa ọnwa, kwa ọnwa, ma ọ bụ kwa afọ dabere na atụmatụ ahọpụtara, bido na ụbọchị ị nyere ikike ịdenye ndenye aha site na Paypal ma ọ bụ site na Mastercard, Visa, Amex ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ọzọ.
Nkwụ ụgwọ niile site na Paypal & Mastercard, Visa, Amex ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ọzọ bụ maka mebere, nke anaghị akwụghachi ụgwọ na ọgbakọ anyị. Mgbe ị banyechara na nzuzo anyị ma ọ bụ sọftụwia mebere, ị nwetala uru nke nzụta gị.
Dika nchuta nile bu maka ndenye aha nzuko na uzo nke software, a ghaghachitere nzaghachi.
Ego ị kwụrụ bụ nke anaghị akwụghachi, a na-akwụ ụgwọ gị tupu oge eruo. A gaghị enwe nkwụghachi ọ bụla n'ụdị ma ọ bụ kwụrụ ụgwọ n'ọdịnihu maka ojiji nke ọnwa ele mmadụ anya n'ihu.
Mgbe ị na-abanye na nnọkọ nzuzo anyị, ma ọ bụ ịnweta ngwanrọ ngwanrọ anyị nke na-achọ akaụntụ ịkwụ ụgwọ, ị natara uru zuru oke nke ndenye aha gị ma ghara iru eru maka nkwụghachi ma ọ bụ akwụmụgwọ ọ bụla.
Ego niile nwere ụdị ụtụ isi ọ bụla, ụtụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọrụ ụtụ isi na-akwụ.
Ọrụ ahụ agaghị arụ ọrụ maka ọghọm nke ọdịnaya ma ọ bụ atụmatụ ma ọ bụ enweghị ike ịrụ ọrụ ndị na-esite na iweda akaụntụ ahụ ala.
Kagbu na nchupu___________________________
Nanị ụzọ ị ga-esi kagbuo ndenye aha ọ bụla na Ọrụ a bụ site na Paypal ma ọ bụ Via onye na-akwụ ụgwọ anyị.
Mgbe ngwụcha nke ndebanye aha gị kwụrụ ụgwọ, akaụntụ gị ga-ewedata na ndị otu na-akwụghị ụgwọ.
Ọrụ a nwere ikike ịjụ ọrụ onye ọ bụla maka ihe ọ bụla n'oge ọ bụla.
Ọrụ ahụ nwere ikike ịkwụsị akaụntụ gị. Nke a ga - eme ka deactivation ma ọ bụ hichapụ akaụntụ gị, a ga - egbochi gị ịnweta ọrụ ahụ.
Ọdịda nke Ọrụ ahụ iji gosipụta ma ọ bụ mezuo ikike ọ bụla ma ọ bụ ndokwa nke Usoro Ọrụ agaghị abụ iwepụ ikike ma ọ bụ ikike dị otú ahụ. Usoro nke Ọrụ bụ nkwekọrịta niile dị n'etiti gị na Ọrụ ahụ ma na-achịkwa ojiji nke Ọrụ ahụ, na-etinye nkwekọrịta ọ bụla tupu gị na Ọrụ ahụ.
Ọrụ ahụ nwere ikike imelite ma gbanwee Usoro Ọrụ site n'oge ruo n'oge na-enweghị ọkwa. Mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ mmelite ọ bụla emere na ngwa a dabere na Usoro Ọrụ ndị a. Ga n'ihu n'iji ọrụ ahụ eme mgbe ụdị mgbanwe ma ọ bụ mmelite ndị a mechara ga-abụ nkwenye gị na mmelite ndị ahụ na / ma ọ bụ mgbanwe ndị ahụ.
N'ọnọdụ ọ bụla ị nwere ajụjụ gbasara iwu nkwụghachi, ị nwere ike zigara ya [email protected]